डेंगु कसरी सर्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? | Makalukhabar.com
डेंगु कसरी सर्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ?
साउन १४, विराटनगर । गर्मीको मौसममा विशेषगरी तराईमा विभिन्न किसिमका रोगहरु फैलिन्छन् । हुन त गर्मीमा जुनसुकै ठाउँमा पनि विभिन्न रोगहरुको प्रकोप देखा पर्छन् । त्यसमाथि पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि विभिन्न रोगहरु फैलिरहेका हुन्छन् ।
विशेषगरी तराईमा फरक खालका रोगले ब्यक्तिहरु संक्रमित भइरहेका हुन्छन् । तराईमा गर्मीयाममा देखिने विभिन्न रोग मध्ये अहिले महामारीको रुपमा फैलिँदै गएको रोग हो डेंगु । बुढीगंगा गाउँपालिका टंकी २ मा अवस्थित बिराट मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलमा पनि अहिले प्रत्येक दिनजसो डेङगुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
वास्तवमा यो डेंगु के हो ? यसका लक्षणहरु के के हुन ? यो रोग कसरी फैलिन्छ ? यो रोगबाट बच्ने उपायहरु के–के हुन् ? यसबारे बिराट मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलका मेडिसिन विभागका डा.राम कुमार मेहेता सँगको कुराकानीः
डा.राम कुमार मेहेता
डेङगु संक्रमण एक किसिमको एडिज लामखुट्टेले गर्छ । हात मिलाउँदैमा, अंगालो मार्दैमा सँगै खाना खाँदैमा यो भाइरस सर्दैन । संक्रमित भएको ब्यक्तिलाई यदि कुनै लामखुट्टेले टोक्यो र त्यहि लामखुट्टेले सामान्य ब्यक्तिलाई टोक्यो भने डेङगु सर्छ । पानी जम्ने ठाउँमा गर्मीमा र पानी बग्ने व्यवस्था राम्रोसँग नहुने ठाँउमा एडिज लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने गर्दछ ।
WHO २००९ अनुसार Dengue without sign जसमा एकदमै बढी ज्वरो आउँछ । ५ देखि ७ दिनसम्म जिउ एकदमै दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, आँखा मुनि दुख्ने जस्ता साधारण लक्षण देखा पर्छन् ।
डा. मेहेता बिराट मेडिकल कलेज टिचिङ्ग अस्पतालको मेडिसिन विभागमा कार्यरत छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी बढेपछि दुर्घटना बढ्दो
तौल घटाउने किटो डाइट भनेको के हो ?
मंसिर २९, काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरुमा मोटोपनको समस्या अत्याधिक देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । मोटोपन घटाउन विभिन्न प्रकारका डाइटहरु प्रयोग गर्ने गरिएपनि प्रभावकारी हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको बुझिएको छ । मोटोपन घटाउनका लागि थुप्रै रेस्टिकसन डाइटहरु प्रयोग गर्ने गरेको विराट मेडिकल शिक्ष... जारी राख्नुहोस...
एजेन्सी । के तपाईले पर्याप्त यौन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ? यौन सम्पर्कबाट हुने स्वास्थ्य लाभको बारेमा पढेपछि सायद यौन सम्पर्कको दर बढाउने विषयमा सोच्नुभएको हुनसक्छ ।हप्तामा धेरै पटक यौन सम्पर्क गरेका विवाहित ब्यक्तिहरू वा यौन सम्बन्धमा रहेकाहरु अधिक आनन्दित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । हप्तामा चार वा... जारी राख्नुहोस...
उचाई कम भएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुस उचाई बढाउन
मंसिर २७। मान्छे निश्चित उमेरपछि बढ्न बन्द हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर विज्ञहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरु भन्छन् केही यस्ता एक्सरसाइज छन् जो नियमित गर्ने हो भने शरीरको लम्बाई बढाउन मद्दत गर्दछ ।शरीरको लम्बाइ बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो स्किपिङ । जसलाई हामी सामान्य भाषमा डोरी खेल्ने पनि भ... जारी राख्नुहोस...
मंसिर २६, विराटनगर । प्रदेश नं.१ का सामाजिक मन्त्री जीवन घिमिरेले स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै सहभागिताले ‘पूर्ण खोप अभियान’ सार्थकता नहुने बताएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको खोप कार्यक्रमको उद्घाट गर्दै मन्त्री घिमिरेले खोप अभियान अत्यन्तै ठूलो र चुनौतिपूर्ण रह... जारी राख्नुहोस...